ဆံပင်ဆေးဆိုးရင်း အရေပြားမှာ စွန်းသွားခဲ့ရင် - Hello Sayarwon
ဆံပင်ဆေးဆိုးရင်း အရေပြားမှာ စွန်းသွားခဲ့ရင်
ဆံပင် ဖြူနေလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆံပင်ကို အရောင်လှလှဆေး ဆိုးချင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆံပင်ကို ဆေးဆိုးတဲ့အခါ မတော်တဆ အသားမှာ ပေကျံသွားတာမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။ စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးရော ဖြစ်ဖူးလား ……
ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါ ဆိုးဆေးက အချိန်အတော်ကြာတဲ့အထိ အသားမှာ စွဲထင်နေတတ်ပြီး စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ ဆံပင်ဆိုးဆေး အသားမှာ ပေနေတာကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ အကြောင်း ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
ဆံပင်ဆေးဆိုးရင်း အရေပြားမှာ စွန်းသွားခဲ့ရင် အခုလို ဖြေရှင်းလိုက်ပါ။ အရေပြားမှာ ပေကျံရစ်ခဲ့တဲ့ ဆံပင် ဆိုးဆေးတွေကို ဖျက်ပစ်ဖို့ဘာတွေ လိုမလဲ။ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဆိုတာကို အတူတူ ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
အရေပြားမှာ ပေကျံရစ်ခဲ့တဲ့ ဆံပင် ဆိုးဆေးတွေကို ဖျက်ပစ်ဖို့ဘာတွေ လိုမလဲ …….
အရေပြားမှာ ပေကျံရစ်ခဲ့တဲ့ ဆံပင် ဆိုးဆေးတွေကို ဖျက်ပစ်ဖို့ ဒါလေးတွေ လိုအပ်ပါမယ်။
ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ …….
ဒီနည်းလမ်းလေးတွေ သုံးပြီး အရေပြားမှာ ပေကျံရစ်ခဲ့တဲ့ ဆံပင် ဆိုးဆေးတွေကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေးရည် – မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေးရည် ကို ဂွမ်းစမှာ ဆွတ်ပြီး ဆံပင်ဆိုးဆေး ပေတဲ့နေရာကို ပွတ်တိုက်ပေးပါ။
စီးကရက်ပြာ – နောက်တစ်နည်းကတော့ ဆံပင်ဆိုးဆေး ပေသွားတဲ့နေရာကို စီးကရက်ပြာ လိမ်းလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ရေနဲ့ ဆေးချလိုက်ပါ။ မပြောင်မချင်း လုပ်ပေးပါ။
သွားတိုက်ဆေး – ဂျယ်လ်မဟုတ်တဲ့ သွားတိုက်ဆေးကို ဆိုးဆေး ပေသွားတဲ့နေရာမှာ ခပ်ပါးပါး လိမ်းလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ရေစိုဝတ်နဲ့ စက်ဝိုင်းပုံ သုတ်ပေးပါ။ ပြီးရင် ရေဆေးချပေးပါ။
သံပုရာရည် – သံပုရာရည်ကတော့ အစွန်းချွတ်ပေးနိုင်တဲ့ သဘာဝ နည်းလမ်းတစ်ရပ်ပါ။ ဆံပင်ဆိုးဆေး ပေနေတဲ့ နေရာကို သံပုရာရည် ပွတ်ထားပါ။ ပြီးရင် အဝတ်စသန့်သန့်လေးနဲ့ ပွတ်ချလိုက်ပါ။
အရက်ပြန် – နောက်တစ်နည်းကတော့ အရက်ပြန်ပါ။ အရက်ပြန်ကို စပရေးဗူးနဲ့ ထည့်ပြီး ဆိုးဆေးပေတဲ့နေရာကို ဖြန်းလိုက်ပါ။ ခဏထားပြီး ဂွမ်းနဲ့ သုတ်ချလိုက်ရုံပါ။ ပြီးရင်တော့ ရေဆေးချဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
ဗီနီကာ – ဗီနီကာကလည်း အစွန်းချွတ်တဲ့ နေရာမှာ အတော်လေး အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဗီနီကာနဲ့ရေကို ဆတူရောပြီး ဆိုးဆေးပေတဲ့နေရာကို ဖြန်းလိုက်ပါ။ ခဏထားပြီး ဂွမ်းနဲ့ သုတ်ချလိုက်ရုံပါ။
ဆံပင်ဆိုးဆေး – နောက်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ ဆံပင်ဆိုးဆေးပေပြီး ခြောက်နေတဲ့ နေရာကို ဆိုးဆေး အသစ် လိမ်းလိုက်ပြီး တစ်သျှူးစနဲ့ သုတ်ချလိုက်တာပါ။ ဒါကလည်း အရေပြားမှာ ပေကျံရစ်ခဲ့တဲ့ ဆံပင် ဆိုးဆေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်း တစ်ရပ်ပါပဲ။
ကဲ….. အရေပြားမှာ ပေကျံရစ်ခဲ့တဲ့ ဆံပင် ဆိုးဆေးတွေကြောင့် စိတ်ညစ်မနေပါနဲ့တော့။ ဆံပင်ဆေးဆိုးရင်း အရေပြားမှာ စွန်းသွားခဲ့ရင် အခုပြောခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေ သုံးပြီး ဖြေရှင်းလိုက်ပါ။
How to Remove Hair Dye from Skin https://www.howtocleanstuff.net/how-to-remove-hair-dye-from-skin/ Accessed Date4October 2021
အဝတ်အစားတွေ ဆီစွန်း သွားရင်
အစွန်းချွတ်ဆေး တွေက ဘယ်လို ဆိုးကျိုးတွေ ရှိသလဲ။